८८ वर्ष ८ महिना ८ दिनमा - Worldnews.com
८८ वर्ष ८ महिना ८ दिनमा
ललितपुरस्थित नेवारी परम्पराअनुसार तीनपटक जन्कु गरिएका सूर्यदश जोशी र पत्नी कृष्णवदन जोशी ८८ वर्ष ८ महिना ८ दिनमा गरिने यो जन्कुपछि जीवित देवताको रूपमा लिने गरिन्छ । तस्वीरः उजोल डंगोल⁄नेस ...
तीन पटक जन्कु गरियो
ललितपुर स्थित नेवारी परम्परा अनुसार। सुर्य दस जोशी र पत्नी कृष्ण बदन जोशी ८८ बर्ष ८ महिना ८ दिनमा गरिने यो जन्कु पछी जिबित देवता को रुप्मा लिने गरिछ। तस्बिर उजोल डगोल/नेस ।...
नेपाली कांग्रेस प्रदेशतर्फका समानुपातिक उम्मेदवार ८८ किलोका अर्का सुन तस्कर !
काठमाडौँ । चीनको केरूङ हुँदै रसुवागढी नाकाबाट तस्करी गरी ल्याइएको ८८ किलो सुन प्रकरणमा सोमबार एकजना व्यापारी पक्राउ परेका छन् । यो सुन तस्करी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीले...
महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाले कम्बोडिया पठाइदिन्छु भनी ८८ लाख ठगी गर्ने एक जनालाई आज काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा झापा शिवसताक्षी नगरपालिका –९ का २४...
कांग्रेस नेता ८८ किलो सुनतस्करीका मुख्य एजेन्ट, नेपाल–चीन केरुङ्ग व्यापार संघका अध्यक्ष तामाङ पक्राउ
काठमाडौँ । ८८ किलो सुनतस्करीका मुख्य एजेन्ट नेपाली कांग्रेसका नेता मानबहादुर तामाङ पक्राउ परेका छन । सोमबार प्रहरीले ८८ केजी सुन तस्करीमा मुख्य भूमिका खेलेका कांग्रेस नेता...
काठमाडौंबाट समातियो ८८ किलो सुन, अहिलेसम्मकै ठूलो परिमाण (फोटो फिचरसहित)
नेपाल समाचापत्र, काठमाडौ । काठमाडौंको क्षेत्रपाटीबाट ८८ किलो सुनसहित प्रहरीले एक जना चिनिया नागरीकलाई पक्राउ गरेको छ । बा १७ च ६४२७ नम्बरको गाडीबाट प्रहरीले सुन बरामद...
News of Nepal 2017-09-04
सातामा १० जना ग्राहकसँग सुत्छिन् ८८ वर्षिया शिला !
शिला भोगेल कोपे विश्वकै सबैभन्दा बूढी बेश्या हुन् । ब्रिटेन निवासी ८८ वर्षिया शिला अहिले पनि सातामा १० जना ग्राहकसँग सुत्छिन् उनले घण्टाको २ सय ५० पाउन्ड कमाउछिन । उनी ती...
शिला भोगेल कोपे विश्वकै सबैभन्दा बूढी बेश्या हुन् । ब्रिटेन निवासी ८८ वर्षिया शिला अहिले पनि सातामा १० जना ग्राहकसँग सुत्छिन् उनले घण्टाको २ सय ५० पाउन्ड कमाउछिन । उनी ती वर्ष अघि नै संसारकै बुढी बेश्या घोषित भएकी थिइन् । मिनिस्कट लगाएर र उग्लो हिल भएको जुत्ता लगाएर ग्राहकलाई रिझाउन पुग्ने शिला आफूलाई निकै सेक्सी भएकै कारणले वेश्यावृति पेशा अंगालेको बताउँछिन् । -एजेन्सी The...
तस्करी गर्ने डिएसपीकाे पाेल खुल्याेः ​८८ केजी सुन काण्डमा संलग्न !
काठमाडौैं । दुई महिनाअघि काठमाडौंमा बरामद भएको ८८ केजी सुन प्रहरीकै सेटिङमा भित्रिएको प्रष्ट भएको छ । पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले सुन बोकेको गाडी प्रहरीले नै चलाएर रसुवागढी नाकाबाट नेपाल पास गराइदिएको बयान दिएका छन् । प्रहरीले सोमबार ८८ केजी सुन तस्करीमा सेटिङ मिलाउने जिम्मा लिएका रसुवाका मानबहादुर तामाङलाई पक्राउ गरेको छ । उनले रसुवामा प्रहरीसँग सेटिङ मिलाएर सुन तस्करी गर्दै...
बिकृती बन्दै भक्तपुरको साँस्कृतिक पर्व गाईजात्रा
पुष्कर बुढाथोकी, भक्तपुर । गाईजात्रा पर्वमा घिनिताङ्ग घिनिताङ्ग घिन्ताङघिसी त्वाङ्ग’ भनेर साँस्कृतिक गीत गाएर भक्तपुरमा नाचिने प्रसिद्ध घिन्ताङघिसी नाचमा चरम बिकृति भित्रिएको छ ।प्राचिन नाँचको रुपमा लिईने आकर्षक यो नाँचलाई युवा पुस्ताले अश्लिल शब्दकौ रुपमा परिणत गरेर गाउँन थालेपछि सस्कृतिमा छाएको बिकृति देखेर स्थानिय वासिन्दा तथा संस्कृतकर्मीहरु समेत चिन्तित बनेका छन्...
८८ किलो सुनका मालिक चिनियाँ दम्पतीलाई भगाइयो
दीपक रिजाल, काठमाडौं १० वर्षअघि सामान्य व्यापारीका रूपमा नेपाल प्रवेश गरेका एक चिनियाँ दम्पतीले अवैधरूपमा ल्याएको ८८ किलो सुन काठमाडौंमा समातिएपछि उनीहरूले यसअघि गरेका अवैध धन्दा बाहिर आएको छ। चीनको राजधानी बेइजिङनजिकैबाट नेपाल आएका चिनियाँ दम्पती वान विइ मिङ र याङ बेन विङले व्यापारका नाममा नेपालमा बसेर अवैध धन्दा चलाएको तथ्य फेला परेको छ। व्यापार गर्ने नाममा उनीहरूले ठमेलमा...
८८ किलो सुन तस्करीका अभियुक्त धरौटीमा रिहा
काठमाडौं, (नेस) सर्वोच्च अदालतले ८८ किलो सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोप लागेका दुई अभियुक्तलाई बिहीबार धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बिहीबार ५ लाख धरौटी तिरेर बिहीबार नै साधारण तारेखमा रिहा गरेको सर्वोच्च अदालतका...